ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာလေးတွေရရှိပိုင်ဆိုင်စေဖို့. . . . . - Pissaya News
အလှကြိုက်တဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် အသားရေကြည်ပြီးဝင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ . . .
ဒိန်ချဉ်( စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း) ၊ပျားရည်( စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်)၊ လိမ္မော်ရည်( လိမ္မော်သီးမှညှစ်ချထားသောအရည် စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)၊သံပရာရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)၊ ကွေကာအုပ် (စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း) တို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုစုပေါင်းရောနယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းပေါ်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ အချိန်ကိုတော့ ၁၀-၁၅မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် မျက်နှာသစ်ပေးပြီး moisturizer cream လိမ်းပေးပါ။
အခုဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ညဘက်တွင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုထိရောက်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် မျက်နှာအသားရေဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုနူးညံ့ပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အတွက် နေလောင်ဒဏ်ကိုသာမန်ထက် ပိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးကို တစ်ပတ်ကို အများဆုံး ၃ကြိမ်အထိ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာ facial mask လေးအုပ်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးသိသာလာမှာပါနော်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ၂၂ အသင်း ဂိုးနည်းပြ ဦးဖြိုးကိုကိုလှိုင် ကို နိုင်ငံတကာ ပွဲများတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း မပြုဖို့ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ ဆုံးဖြတ်
ဆန်းချက်ဇ် မန်ယူတွင် အသားတင် လုပ်ခ လစာ ပေါင် သုံးသိန်းခွဲ ရရှိမည်